Myanmar 18 Plus: ခရေတပွင့်ရဲ့အက်ကြောင်း
ကျွတ်… ကျွတ် … ကျွတ်နီလာလွင် တယောက် ဆက်တီပေါ်ထိုင်အချ ပါးစပ်ကနေငြီးသံလေး ကိုမထိန်းနိုင်ပဲထွက်သွားပါတယ်။ “ ဘာဖြစ်လို့လဲ သမီး ” . . . တီဗွီကြည့်နေတဲ့ ဖေဖေကမေးတော့ ဘာဖြေရမှန်းမသိဘူး။ “ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ” . . . ဆိုပြီး နေလိုက်တော့ ဖေဖေကအာရုံပြန်ပြောင်း သွားပေမယ့် ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မေမေကတော့ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့။သားသမီး ဘာဖြစ်နေနေ အမေတွေကိုလိမ်လို့မရဘူးဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ နီလာနေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာမေမေ ရိပ်မိပါတယ်။ခဏနေတီဗွီရှေ့ကထတော့ ဘေးကကပ်လိုက်လာပြီးမေးတယ်။“
သမီးဘာဖြစ်နေလဲ ” . . . ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်နေတဲ့နီလာ့ကိုအသေအချာစိုက်ကြည့်ပြီးမေးနေတဲ့ မေမေ့ကိုလိမ်လို့မရမှန်းလဲ သိလို့အမှန်အတိုင်းပဲ ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။. . . “ အဲ အင်း သမီးနောက်မှာ နည်းနည်းနာနေလို့ ” . . . . . . “ ဘယ်နောက်လည်းသမီး ” . . . ၀ါးတားတားပဲဖြေလိုက်တာကို သေချာအောင်ထပ်မေးပါတယ်။. . . “ နောက်မှာပါဆိုမှ အမေကလည်း အစကတော့ နောက်ဖေးသွားမှနာတာ၊ ခုထိုင်ရင်တောင် နည်းနည်းစပ်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်နေတယ်။ ” . . . နီလာ့မေမေ သဘောပေါက်သွားပါပြီ။ . . . “ ထင်သားပဲ တခုခုဖြစ်နေပါတယလို့ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ” . . . . . . “ ၃၊ ၄ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ထားလိုက်ပါ ခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ ဟာကို။ ၁ရက်၂ရက်နေကောင်းသွားမှာ။ ” . . . ခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြေလိုက်တာကို မေမေ ကြိုက်ပုံမပေါ် . . . “ မိနီ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လုပ်မနေနဲ့ ခဏခဏလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လား ” . . . “ ဘယ်လောက်တောင်မှလဲ အမေ့ကိုပြ လာအခန်းထဲမှာကြည့်မယ် ” . . . နီလာ ကတအားအရှက်ကြီးတာ မေမေ့ကိုလည်းရှက်တာပဲ။ မရဘူး။ ဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေပြီ မဖြစ်မနေလည်းမဟုတ်ဘူး အဲဒီ့နေရာကိုတော့ မပြချင်ပါဘူး။. . . “ ဟင့်အင်း အမေကလည်း သေးသေးလေးပဲဟာ။ ထားလိုက်ပါ။ ” . . .. . . “ ဘာ သေးသေးလေးလဲ စအိုဝပြဲတာကိုများကို ပေါ့ပေါ့လေးမှတ်လို့။ နောက်ဒီထက်ကြီးလာရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ။ ” . . . မေမေ့အသံကြီးကျယ်သွားတော့ နီလာလန့်ဖြန့်သွားတယ်။ ဖေဖေတို့၊ မောင်လေးတို့ကြားကုန်မှဖြင့် ရှက်စရာကြီး။ မမကြီးဖင်ပြဲတယ်ဆိုပြီးတော့။လက်ချောင်းကို ပါးစပ်ဝမှ ထောင်ပြီး တရှုးရှုးနဲ့မေမေ့အသံကို ချခိုင်းရတယ်။. . . “ အမေလုပ်မှ အကုန်သိကုန်တော့မှာပဲ။ သေးသေးလေးပါဆိုမှ။ ” . . . . . . “ ပြီးတာပဲ ငါ့ကိုမပြချင်လဲနေ။ မျိုးကို ကိုတော့ဖုန်းဆက်ပြောရမယ်။ ဒီအတိုင်းထားလို့တော့ မဖြစ်ဖူး။ ” . . . နီလာမျက်နှာကြီး ရဲခနဲဖြစ်သွားပြီး ထူပူသွားတယ်။ . . . “ ဟာ ကိုမျိုးကို မပြောပါနဲ့ သမီးရှက်လို့ ” . . . “ အမေ ”. . .
ကိုမျိုး ဆိုတာနီလာလွင့် အကိုတ၀မ်းကွဲ ဆရာဝန် ဒေါက်တာ မျိုးကို။ အမျိုးတွေထဲမှာ တယောက်တည်းသော ဆရာဝန်။မေမေတို့ အပါအ၀င်တမျိုးလုံး ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တခုတခုဆို ကိုမျိုး ကိုပဲဝိုင်းပြောကြ တိုင်ပင်ကြနဲ့။ ကိုမျိုးကလည်း အားကိုးရပါသည်။ အမျိုးထဲကတယောက်တယောက် ဖျားတယ်နာတယ် တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူပဲဒိုင်ခံပြုစုပေးတယ်။လိုလာရင်သူ့ဆရာကြီးတွေနဲ့ပြပေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဆေးရုံထိလိုက်စောင့်ပါတယ်။ ကိုမျိုးကနီလာလွင်ထက် ၂နှစ်ပဲကြီးတာ။သူကကြတော့ ငယ်ငယ်တည်းကဆော့ဖော်ဆော့ဖက်ဆိုတော့ ခုထိစဟယ်နောက်ဟယ်နဲ့ ဆိုတော့ မေမေတို့မြင်သလိုကို မမြင်တာ။နီလာလွင်ကလည်း မာစတာပြီးစ တက္ကသိုလ်မှာကျူတာပေါက်စဆိုတော့ သူလည်းသူ့ပညာမာနလေးနဲ့ကတထောင်ထောင်ပေါ့။. . . “ သားရေ အားလား။ အေးအေး မင့်ညီမအကြောင်းပြောမလို့ ။ ”. . . အခန်းဝကနေမေမေ့ အသံကိုကြားတော့ နီလာ စိတ်ညစ်သွားတယ်။ခုလည်းအသံကျယ်ကျယ် ကျယ်ကျယ်နဲ့တီဗွီက အသံနဲ့မို့ဖေဖေတို့မကြားလောက်သာ တော်သေး။သူ့စအိုဝမှာ စပါးတထောက်လောက်လေး ကွဲသွားတာကို မေမေ ကရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး သွားပြောသည်။ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း။
မောင်နှမ၀မ်းကွဲချင်းလည်းဖြစ်။ ဆရာဝန်လည်းဖြစ်ပေမယ့် ရှက်ရှက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမို့ ရှက်ရှက်ဖြစ်ရပါတယ်။. . . “ နီလာ လာနင့်အကိုနဲ့လာပြော ” . . .မေမေပေးတဲ့ ဟန်းဖုန်းကို နီလာရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းနဲ့ပဲ လှန်းယူလိုက်တယ်။. . . “ ဟီးဟီး ကိုမျိုး ” . . . လူကြီးရှက်တော့ရယ်တဲ့။ သူလည်း ၂၆ နှစ်တက္ကသိုလ်ဆရာမပဲ ရှက်ရှက်နဲ့ ဟီးဟီး ကနေစပြောဖြစ်တယ်..
. . “ ကဲကောင်မလေး ဘယ်လိုဖြစ်ရတာတုန်း” . . . ဟွန့် လာပြန်ပြီဒီ ကောင်မလေး နီလာကသူ့ထက်၂နှစ်ပဲငယ်တာ။ ကောင်မလေးလို့ခေါ်တာ ဟိုးငယ်ငယ်လေးထဲကမကြိုက်ဘူး။ဒါပေမယ့်ခုတော့ ပြန်လှန်ရန်တွေ့ဖို့ အားမရှိ။ ဖြစ်ကြောင်းရယ်ကုန်စင်ကိုသာ ကိုမျိုးကိုပြောရပါတော့တယ်။ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားစရာတော့မလို။ ရှက်တာကတော့ ရှက်တာပဲ အသံတွေမတုန်တောင် ထိန်းရင်း တဟီးဟီး တွေညှပ်ပြီး ပြောရတယ်။နီလာပြောစရာရှိတာတွေပြီးတော့ ကိုမျိုးကလုပ်ရမယ် ဟာတွေပြောပါတယ်။. . . “ အဲဒါ fissure ဖြစ်နေတာ။ ကိုမျိုးကြည့်ပေးရင်တော့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆာဂျင် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်) နဲ့ပြရင်ပိုကောင်းမယ်။ ” . . . . . . “ ဘယ်နေ့ပြချင်လဲ။ ခုနာနေသေးရင်တော့ တခါတည်းစမ်းသပ်လို့ပြီးမှာ မဟုတ်ဖူး။ နောက်တခေါက်ထပ်သွားနေရမယ်။ ” . . . ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်း နီလာမသိ။ ဒါပေမယ့်ကိုမျိုးကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှမပြနိုင်ပါဘူး။ ရှက်ပြီးသေလိမ့်မယ်။သူ့ပြောတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မကြီး တယောက်နဲ့သွားပြရင်လည်း ပြရမှာကပြရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်အမြဲတွေ့နေမယ့်မျက်နှာ မဟုတ်တော့တော်သေးတယ်။. . . “ ခုအရင်လုပ်ရမှာက ရေများများသောက်၊ အသီးအရွက်များများစား။ သွားချင်ရင်အောင့်မထားနဲ့ ” . . . . . . “ အပူစပ်မစားနဲ့ ။ အဓိကကတော့ နင်ကြိုက်တဲ့ သင်္ဘောသီးထောင်းစပ်စပ်၊ မုန့်တီစပ်စပ်ကိုရှောင်ပေတော့ ” . . . . . . “ ဟာ ကိုမျိုးကလဲ ဒါသက်သက်ညစ်တာ ”. . . နီလာသိပ်ကြိုက်တဲ့ အစာတွေကိုမှရွေးရှောင်ခိုင်းသလိုပဲ။. . . “ အမယ် စားချင်ရင်စားပေါ့ ပြီးမှခံစားကြည့်။ ဖင်ရေစိမ်နေရမယ်။ ” . . .ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ ကိုမျိုးမပြောရင်တောင် နီလာသိသာပါတယ်။ အရင်အခေါက်တွေဖြစ်တုန်းကလည်းအစပ်ရှောင်ရတယ်။ ဘယ်နေ့ဆေးခန်းပြမှာလည်း ချိန်းပြီးတော့မှ ဖုန်းချလိုက်ပါတယ်။“ ဟင်း ” . . . . . . . . ကြာသပတေးနေ့ ညနေကိုရောက်မှာ နီလာလွင် တွေးပြီးကြောက်နေပါတယ်။ဆေးခန်းသွားရမယ့်နေ့ပါ။ မေမေကလည်းလိုက်မယ်တဲ့ သူ့သမီးကိုး။ တားလို့မရ။ကိုမျိုးကလည်းလိုက်မယ်တဲ့ ဆရာဝန်မကြီးကလည်းသူ့ဆရာမ လူနာကလည်းကိုယ့်ညီမ၀မ်းကွဲ ။ ငြင်းလို့မကောင်း။အထူးကုဆေးခန်းကြီးတခုရဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတဲ့ ခုံတန်းလေးမှာထိုင်နေရင်း နီလာရင်တွေတဒုန်းဒုန်းခုန်နေပါတယ်။ကိုမျိုးကတော့ မေမေနဲ့စကားကောင်းနေလေရဲ့။ ၅ရက်ခန့်ရှိပြီမို့ နီလာခရေပွင့်လေးလည်း အနာကျက်သွားပါပြီ။ဒါပေမယ့် ခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စမို့ တခါတည်းရှင်းတာကောင်းတယ်ဆိုလို့ လာပြရတာပါ။ကျောင်းသွားရင် ဆရာမပီပီ ထမီနဲ့ရင်ဖုံးလေးပဲ အမြဲဝတ်ရတဲ့နီလာ ဒီနေ့တော့ဂါဝန်ပွပွပါးပါးလေးတထည် ၀တ်လာပါတယ်။ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိနေတယ်လေ။ အဆင်ပြေအောင်တခါတည်း အ၀တ်ရွေးလာတာ။နီလာခုထိမှတ်ယူထားတာကတော့ စမ်းသပ်ရင်တော့ကိုမျိုးကိုပေးကြည့်လို့မဖြစ်ဖူး။အထဲမှာလည်း လိုက်ကာရှိမှာပဲ။ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆေးခန်းပြတုန်းကတော့ ဒီဆေးခန်းကြီးရောက်ဖူးတယ်။ စမ်းသပ်ကုတင်ဘေးမှာလိုက်ကာရှိတယ်။ဆရာဝန်တယောက်အဖို့ အဲလိုကိစ္စတွေကို မြင်ဖူးတွေ့ဖူးတာရိုးနေပြီ လူနာကိုလူနာလို့ပဲ မြင်တတ်မှန်းနီလာသိပါတယ်။ကိုမျိုးလည်း ဆရာဝန်ဆိုတော့ နီလာ့အတွင်းပစ္စည်းတွေကို စမ်းသပ်နေတဲ့အချိန်မှာမြင်လည်း ဘယ်လိုမှနေမှာမဟုတ်။လူနာတယောက်အနေနဲ့သာ မြင်ပြီး ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ ပညာမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်မှာပါ။ဒါပေမယ့် နီလာက ဆရာဝန်နေရာမှာမှ မဟုတ်တာ။လူနာနေရာမှာ။ ဖင်လှန်ရမယ့်သူနေရာမှာ။ ညီမ၀မ်းကွဲတယောက်နေရာမှာ ဆိုတော့ ရှက်လွန်လွန်းချည်ရဲ့။နီလာလွင် ခုထိချစ်သူရည်းစားမရှိသေးတာမဟုတ်ဘူး။ ရုပ်ချောပါတယ်။ အိုးကောင်းပါတယ်။ ပစ္စည်းထွားပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှလည်းမပြဖူးဘူး။ ဒီနေ့တော့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖုံးကွယ်အပ်တဲ့ အရာတွေကို လှစ်ဟာပြရတော့မယ်ဆိုတော့ ရင်ထဲမှာတော့ တမျိုးကြီးပဲ။. . . “ မနီလာလွင် မရမ်းကုန်း ရှိပါသလားရှင် ” . . . အခန်းဝကခေါ်တဲ့ အသံကြောင့် သူတို့၃ယောက်လုံး ထလိုက်ကြပါတယ်။
. . . “ ကျွန်တော့်ညီမပါ အမ။ ” . . .ကိုမျိုးရဲ့စကားသံနဲ့ အတူနီလာမရဲတရဲလေး ဆရာမကြီးမျက်နှာကိုမော့ကြည့် မိပါတယ်။သူ့ကိုပြန်ပြုံးကြည့်နေတဲ့ အသက်၅၀အရွယ် ဆရာဝန်မကြီးမျက်နှာကြောင့်တော့ တအားတက်ရပါတယ်။ဘေးမှာကလည်း သူနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိမယ့်ဆရာဝန်မလေးတယောက်။ လက်ထောက်ထင်ပါတယ်။မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့
သူနာပြုအကူမလေးကလည်း အရွယ်မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ။ သုံးယောက်သား စားပွဲရှေ့မှာ အစီအရီထိုင်လိုက်ရင်း ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို စပြောဖြစ်ပါသည်။ဆရာဝန်မကြီးမေးတာတွေကို နီလာ ဖြေပါတယ်။ ကိုမျိုးလည်းတခွန်းတခွန်းဝင်ပြောပေးပါတယ်။လူ၅ယောက်ကြားမှာ ပြောနေရတာဆိုပေမယ့် အင်တာဗျူးဖြေသလိုပါပဲ။ မဖြေမီကရှက်ကြောက်နေပေမယ့် ခုတော့လည်းလျှောလျှောရှုရှုပါ။“ စမ်းကြည့်ရမယ် သမီးကုတင်ပေါ်တက် ” . . .အခုမှ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်သွားသလိုခံစားမိလိုက်ပါတယ်။ လေးလေးပင်ပင်နဲ့ ပဲထလိုက်ပါတယ်။လူကတော့ အရှက်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ပါပဲ။ နောက်ဖက်ကကုတင်ခြေရင်းမှာ ဖိနပ်လေးချွတ်ပြီး တက်လိုက်ပါပြီ။ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ လိုက်ကာကို သူနာပြုအကူကောင်မလေးကဆွဲပြီးကာလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်မကြီး၊ လက်ထောက်ဆရာဝန်မလေး၊ သူနာပြုအကူမလေး၊ ပြီးတော့ နီလာ့မေမေ။ လှဲအိပ်နေရာကနေ မျက်လုံးလေးပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့ ကြည့်နေရင်း. . . “ သားပဲပြောပြပါကွယ် အန်တီတို့နားမလည်ပါဘူး။ ” . . .မေမေ့ရဲ့စကားသံနဲ့အတူ ကိုမျိုးမျက်နှာကိုပါမြင်လိုက်ရပါတယ်။သွေးစုတ်ပြီးဖြူစွတ်သွားသလား။ သွေးရောင်လွှမ်းပြီးရဲတက်လာသလား။ မသိပါဘူး။ နှလုံးခုန်ရပ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ဗိုက်သားဖွေးဖွေးလေးတွေကို ဆရာမကြီးကသေချာစမ်းသပ်နေပါပြီ။ သူတို့ကလည်းကြည့်နေပါသည်။ ချစ်စရာ
ချက်လေးကလည်း စပ်ဖြဲဖြဲလုပ်နေသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်နီလာ အာရုံက၀မ်းဗိုက်ပေါ်မှာလုံးလုံးမရှိတော့ပါဘူး။ မတွေးရဲတဲ့နောက်တဆင့်ကိုပဲ တွေးနေမိတယ်။. . . “ သမီးဟိုဘက်စောင်းပေး ” . . .ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီး ဘေးတစောင်းလေးလှဲလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကိုကျောပေးထားလိုက်ပါပြီ။. . . “ ညီမလေး မရှက်နဲ့နော် ” . . . ဂါဝန်ရဲ့အောက်စကို လာကိုင်တဲ့ ဆရာဝန်မလေးရဲ့အသံပါ။တင်ပါးကြီးတခုလုံးအေးခနဲဖြစ်သွားပါတယ်။ ခုနကရပ်မလိုဖြစ်သွားတဲ့နှလုံး ခုတော့ပါးစပ်က ထွက်ကျမတတ်ခုန်နေပါပြီ။ရိုးရှင်းတဲ့အနီရောင်အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးက နီလာ့ရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့တင်သားစိုင်ကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးသေးနုတ်နေပါတယ်။အလယ်မြှောင်းလေးက ဖင်သားကြီး၂ခုကြားညပ်နေမတပ် ထင်ရပါတယ်။ ဖြူဖြူဝင်းဝင်း ဖင်သားတစ်တစ်ကြီးတွေကတော့ ဘေးဘက်မှာလျှံကြလို့။. . . “ သမီးဘောင်းဘီလေးပါလျှော့ပေးနော်။ အနာကြည့်လို့ရအောင်။ ” . . . နီလာမတုန်မလှုပ်။ အမ်းလို့သာနေပါတယ်။ နီလာ့မေမေလက်က ဘောင်းဘီလေးရဲ့လျှော့ကြိုးကိုလာထိ ပြီးတော့ ဆွဲပြီးလျှောချသွားလိုက်ပါပြီ။ နီလာ့ခေါင်းထဲ ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းဖြစ်သွားပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာကျန်နေတာက . . . “ ကိုမျိုးပါရှိနေတယ် ” . . .
အတွင်းခံလေးက ပေါင်ရင်းကျော်ကျော်မှာ မလိပ်တလိပ်ကလေး။၀င်းဝင်းကြွကြွ ၀ိုင်းစက်နေတဲ့ဖင်လုံးကြီးတွေက အပြစ်အနာအဆာလုံးဝမရှိ။ ရှယ်ဆိုမှရှယ်အိုးကြီးတွေ။. . . “ သမီး အပေါ်ခြေထောက်ကိုကွေးလိုက်နော်။ ဒူးကိုကွေးနိုင်သလိုက်ကွေး။ အောက်ကခြေထောက်မပါဘူး ” . . . တခါတည်းပြောလည်းပြော ကူလည်းကူပေးတဲ့အတိုင်း အပေါ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်ကို ရင်ဘတ်နားရောက်တဲ့ထိ ဒူးကွေးလိုက်ပါတယ်။ အရှက်တရား
ရေကာတာကြီးကတော့ ကျိုးသွားပြီ။ ရှက်ကြောက်နေပေမယ့့့်ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကတားလို့လည်းမရတော့ဘူး မျောလိုက်သွားဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ မြင်ချင်တာကိုမမြင်ရပဲ မလိုအပ်တာတွေကအရင်ပေါ်လာပါတယ်။ဆန့်ထားသောခြေထောက်နဲ့ ကွေးထားတဲ့ခြေထောက်ကြားက ပြဲဟသွားတဲ့ ဖင်ကြားအရင်းမှာ အရင်ပြူထွက်လာတာက နီလာ့ဖုတ်ဖုတ်ကြီး။နှုတ်ခမ်းထူထူ အသားအစ်အစ် ရွှေကြုတ်ကြီးက အဖုံးအကာမရှိ။ အပျိုလေးမို့
စောက်ခေါင်းဝတော့ မမြင်ရ။ နှုတ်ခမ်းသား၂ခုက စေ့ကပ်လို့နေသည်။ အပေါ်ကျကျ အသားစိုင်ဘေးတွေမှာတော့ စောက်မွှေးမဲမဲလေးတွေက တွန့်တွန့် တွန့်တွန့်နဲ့။ အပေါ်ဖက်ဖင်လုံးကြီးကို မလိုက်ပြီး ဖင်ကြားကိုပိုပြဲသွားအောင်ဖြဲလိုက်တော့ နီလာ့ဆီက ညည်းသံတိုးတိုးလေးထွက်လာပါတယ်။ ဖင်လုံးကြီးကြီး ဖင်ကြားနက်နက် ရယ်ဆိုတော့ ညိုတိုတိုဖင်ဝကလေးကို ခုမှပဲကောင်းကောင်းမြင်ရတော့တယ်။အခန်းထဲမှာ
ရှိနေတဲ့ သူအားလုံးဝိုင်းပြီးကြည့်နေတာကလည်း အဲဒီ့နေရာလေးပါပဲ။ ဘာများဖြစ်နေသလည်းလို့။ ခရေပွင့်စူတူတူလေးကတော့ သူပဲဘာမှမဖြစ်ခဲ့သရောင်ရောင် အကောင်းပတိနဲ့။ အားလုံးမှာလည်းကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်။ ဖင်ဝကိုပဲကြည့်တာပေမယ့် နီးနီးကပ်ကပ်ကြီးနဲ့ ပြူးပြူးကြီးမြင်နေရတဲ့ အဖုတ်အယ်အယ်ကြီးကို မမြင်ပဲနဲ့
မနေနိုင်။ဆရာဝန်မကြီးကတော့ ဘယ်မှာလည်းဟဲ့ fissure၊ အနာရွတ်တွေဘာတွေကော
ကျန်သေးလား ဆိုပြီး အပေါ်ဘက်ဖင်လုံးကြီးကဖြဲကာမကာနဲ့ စအိုဝတပတ်လည် စစ်ဆေးရင်းအဖြေထုတ်နေသည်။ ဆရာဝန်မအငယ်လေးကလည်း . . . ငါတော့ဘာမှမတွေ့ဘူး။ အမကော ဘယ်လိုယူဆမလဲမသိဘူး။ တော်တော်ကြီးဖြဲယူရတဲ့ဖင်ကြီး ဖင်ဝတောင်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။ သေချာကြည့်မှ တော်ကြာလွတ်သွားအုံးမယ်။ ပြီးလို့အမက ဘာထင်လဲဘာတွေ့လဲမေးရင်ပြောလို့ရအောင်. . . ဆိုပြီးတွေးနေပါသည်။ သူနာပြုအကူလေးကတော့ . . . သနားပါတယ် ငါသာသူ့နေရာမှာဆို ရှက်ပြီးသေမှာပဲ။ မိန်းမပျိုလေး တန်မဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် လူကြားထဲဖင်ဖြဲပြရတာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် မိန်းမကိုယ်ကြီးကလည်း မနည်းမနော်ကြီး။ ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း။ . . . နီလာ့မေမေကတော့ ကိုယ့်သမီးမို့ ဘာများဖြစ်မလဲစိတ်ပူပြီး သူလည်းကြည့်ကြည့်သည်။ သူ့အမြင်တော့ ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့။ . . . ဆရာဝန်တွေတော့ဘာတွေဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူး။ပြီးတော့မှ တော်တော်ကြီးရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကို အစမ်းသပ်ခံရတာ။ ငါ့သမီးလေးတော့ တအားရှက်ရှာမှာပဲဆိုပြီး စိတ်ထဲတော့မကောင်း။ . . . မျိုးကို လည်းကြည့်သည်။ . . . တော်သေးတာပေါ့။ ဘာမှအဆိုးကြီးမဖြစ်သေးဘူး။ ကောင်းတောင်ကောင်းနေပြီ။ ဒါနဲ့ ဒီကောင်မလေး ပစ္စည်းတွေကလည်းထွားလိုက်တာ။ ငါ့ညီမငါ ဒီလောက်ကြီး ရှိမယ်လို့မထင်ထားဘူး။ ကြည့်ပါဦး ရှေ့ကအင်္ဂါဇာတ်ကြီးကအပြွတ်လိုက်ကြီး နောက်ကကြည့်တာတောင်လိပ်ခုံးကြီးကျနေတာပဲ ဖူး . . . တခြားသူတွေ ဘာတွေတွေးနေထင်နေကြလည်းတော့ နီလာမသိ။ နီလာသိတာက . . . ဖင်ဟောင်းလောင်းကြီးနဲ့ဖင်ဖြဲထားရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖင်လုံးပြောင်ပြောင်ကြီးလဲပေါ်တယ်။ ဖင်ဝလည်းပေါ်တယ်။ စောက်ဖုတ်ကြီးလည်းပေါ်တယ်။ ရှက်လို့လဲသေကြေးဆို ၁၀ခါပြန်သေလို့ရနေပြီ။ ဒါပေမယ့် ခလေးမှမဟုတ်တာ။ ဒါကျန်းမာရေးအရ မဖြစ်လို့အစမ်းသပ်ခံနေရတာ လူကြီးပီပီတွေးစမ်း . . . ဆိုပြီးစိတ်ထဲတတွတ်တွတ်ပြောနေရတယ်။.
. . “ အင်း အနာတော့ကျက်သွားပြီ။ အနာရွတ်တောင်မကျန်ဘူး။ ” . . . ဆရာမကြီးရဲ့အပြောကို ကိုမျိုးတို့ကလည်းခေါင်းညိမ့်ရင်းထောက်ခံပါတယ်။. . . အင်း . . . စိတ်ထဲတော့ထင်လိုက်ပါတယ် ပြီးပြီလို့။ ရုတ်တရက်ထိလာတဲ့ လက်အိပ်ရဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် လူကော စအိုဝလေးကော တွန့်ကနဲ။ .
. . “ သမီး ဆရာမအထဲကိုနည်းနည်းစမ်းမယ်နော် ။ နာရင်ပြော ဟုတ်ပြီလား ” . . .
ဆရာမကြီးကအသိပေးရင်း ဖင်ဝပေါ်လက်ညှိုးလေးတင်ရင် ခဏစောင့်နေပါတယ်။. . . ဟင် . . . ဘာပြောလိုက်တယ် အထဲကိုလက်ညှိုးနဲ့စမ်းအုံးမယ်။ . . . ဒုက္ခပါပဲ။. . . “ အစ် အစ် ” . . . တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အထဲဝင်လာတဲ့ လက်ချောင်းကြောင့် လည်ပင်းထဲထိအောင် တစ်ဆို့ဆို့ဖြစ်သွားပါတယ်။လက်အိပ်စွပ်လက်ညှိုးက
ဖင်ထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေပဲ ဟိုဘက်ဒီဘက်တိုးနေပါတယ်။ ကိုယ့်ဖင်ထဲကိုယ် တခါမှလက်နဲ့နှိုက်မကြည့်ခဲ့ဖူးတာ ခုမှသူများနှိုက်တာခံနေရပြီ။. . . “ သမီး ဆရာမလက်ညှိုးကို ညှစ်ကြည့် . . . ဘာကိုပြောလိုက်တာလဲ နီလာနားမလည်ပါ။. . . “ စအိုဝကိုရှုံ့ပြီးညှစ်ဖို့ပြောတာ ၊ အားရပါးရညှစ် ” . . . နောက်တခေါက်သေချာထပ်ပြောတော့မှ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းသိတယ်။နီလာလည်း ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ရှက်ရှက်နဲ့ ဖင်ကြွက်သားလေးတွေကို အားရပါးရှုံ့ပြီး ဖင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ လက်ညှိုးကိုညှစ်ပလိုက်တယ်။လူလည်းကြက်သိမ်းထသလိုတောင်ဖြစ်သွားပြီး ဖင်ကြောတွေတောင်တွန့်သွားတယ်။ လက်ညှိုးပြန်ထွက်သွားတော့ ထိပ်ဝမှာဟာတာတာလေးဖြစ်သွားသလိုပဲ။. . . “ သမီးမနာဘူးမလား ” . . . အဲဒီမေးခွန်းအတွက်တော့ နီလာခေါင်းငြိမ့်မိလိုက်တယ် ထင်တာပဲ။. . . “ Scope လေးကြည့်ရအောင် ” . . . ဆရာမ၀န်မကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ သူနာပြုအကူမလေးက လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ချက်ချင်းပဲမလာပါတယ်။. . . သမီး ဆရာမအထဲကို ပစ္စည်းတခုနဲ့ကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပြီးရင်ပြီးပြီ ဟုတ်ပလား။ . . . နီလာ့ကို
ဖင်ပြောင်ကြီးအတိုင်းထားရင်း ဘာထပ်စမ်းသပ်အုံးမလို့လဲမသိ။ ဒီတခါတော့ခြေထောက်၂ချောင်းလုံးကို ဒူး၂ဖက်ရင်ဘတ်နဲ့ထိမလောက်ထိ ကွေးခိုင်းလိုက်တယ်။ခလေးလေးတယောက် ဖင်တုံးလုံးနဲ့ကွေးကွေးလေး အိပ်နေသလိုပဲ။ အောက်ကကြည့်ရင်တော့ဖင်ဖြူဖြူကြီး၂လုံးကြားထဲ စောက်ဖုတ်ကြီးညှပ်မိနေတဲ့မြင်ကွင်း။ ခုဏကတော့ပေါင်၂ခုကဟထားတာ ဆိုတော့ မဟာအဖုတ်ကြီးကို နောက်ပြန်ခုံးကြီးတွေ့ရပေမယ့် အခုကျတော့ ယှဉ်မိနေတဲ့ပေါင်တံအရင်းကြားမှာ ဖိညှပ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး ထူထဲထဲနှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေက အလျားလိုက် နောက်ဖက်ကို ပြူးထွက်ကာလျှံကြနေသည်။ မျိုးကို ကိုယ့်ညီမ၀မ်းကွဲရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပျက်နေပုံကိုကြည့်ပြီး စိတ်ထဲတောင်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ . . . ဖူး . . . . . . “ နည်းနည်းလေးတော့နာမယ်သမီး ခဏလေးပဲ နော် ” . . . ဖင်ထပ်ပြီးအဖြဲခံရပြန်ပြီ။ . . . “ အိ အင်း ” . . . မာမာအေးအေး စတီးချောင်းကြီးက ဖင်ခေါင်းထဲကို တိုးဝင်လာပြီ။ထင်ထားတာထက် ကြီးနေတဲ့ပစ္စည်းကြီးကြောင့် နီလာလန့်သွားပါတယ်။.
. . “ အင့် အင့် ” . . . ဖင်တုန်းကြီး တွေတုန်တက်သွားအောင်တွန့်ခါသွားပြီး
တင်ပါးကြီးကိုရှေ့တိုးလိုက်ရင်း၊ နီလာ ဆက်လက်အစစ်ဆေးမခံပဲ ငြင်းဆန်ဖို့ခေါင်းကို နောက်လှည့်လိုက်မိတယ်။ မမျှော်လင့်ပဲ သူ့အောက်ပိုင်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နေကြတဲ့မျက်လုံးတွေ မော့လာတာနဲ့ အကြည့်ချင်းသွားဆုံပါတယ်။ ငယ်ထိပ်ထိတက်သွားတဲ့ ရှက်စိတ်ကြောင့် မျက်လုံးတောင်ပြာထွက်သွားတယ်။ . . . " သမီးနာလို့လား ခဏလေးနော်ခဏလေး " . . . ဆရာဝန်မကြီးက ဖြောင်းဖြစကားပြောသလို အောက်နည်းနည်းပြန်လျှော ဆိုပြီး အပေါ်ဘက်တက်သွားတဲ့ ဖင်ဆုံကြီးကို အောက်ဘက်ပြန်ရွှေ့ခိုင်းပါတယ်။ နီလာလည်း
ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဖင်ကြီးအောက်ဖက်ပြန်တွန်းရွေ့လိုက်ပြီး အတွန့် ထက်မတက်တော့ပါဘူး။ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပဲ တအိအိခံရင်း မျက်ရည်လေးကတော့ လည်းဝဲလာပါတယ်။ ခုနကလက်ညှိုးက အနေရခက်စေတယ်ဆိုရင် အခုကိရိယာကြီးက လူကိုနေလို့ကိုမရအောင်ကို အခံရစိုးပါတယ်။ လက်ညှိုးထက်လည်းကြီးပါသည်။တခုခုလည်းသုတ်ထားတယ်ထင်တယ် ချွဲကျိကျိနဲ့။ . . . အိအိ . . . အံကြိတ်ထားတဲ့ကြားကတောင် အသံကမြှင်းမြှင်းလေးထွက်လာပါတယ်။ ဖင်ဝကို ဖြဲဟပြီးအတွင်းသားတွေကိုပါ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရင်း။ . . . အင်းဘာမှတော့မတွေ့ပါဘူး . . . ဆရာဝန်၃ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ထဲကမှတ်ချက်ပါ။နီလာလွင်
နောက်ပေါက်မပြောနဲ့ အရှေ့ပေါက်တောင်မဖွင့်ရသေးပါဘူး။ အပျိုစစ်စစ်လေးပါ။ ခုတော့လည်း ပြမယ့်ပြရတော့ လူစုံတက်စုံကြားမှာ ဖင်ထဲဘာမှန်းမသိတဲ့ ပစ္စည်းကြီးထိုးထဲ့ပြီး ဖြဲအကြည့်ခံနေရပါပြီ။ဖင်ဝကနေ အဲဒီ့ပစ္စည်းကြီး ပြလွတ်ခနဲ ပြန်ထွက်သွားတော့ ဖင်ခေါင်းကြီး ပြန်မပိတ်တော့ပဲ ဟစိဟစိနဲ့ဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်ကျန်ခဲ့သလိုလိုနဲ့ အီလည်လည်ကြီး။ . . . “ ပြီးပြီနော်သမီး ” . . . ချွတ်တုန်းကတော့ သူများလုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ပြန်ဝတ်တဲ့အခါတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပါပဲ။ ကုတင်ပေါ်က အဆင်းမေမေကလာတွဲ ပေးတာတောင် . . . ရပါတယ်အမေရယ် . . . ဆိုပြီးပြောလိုက်သေးတယ်။ ရှက်လွန်းလို့ မျက်ရည်လေး ၀ဲတဲတဲပေမယ့် မျက်နှာကတော့ ဘာမှမဖြစ်သယောင် စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ပါပဲ။ ဆရာမကြီးပြောတဲ့ အကြံပေးချက်တွေကတော့ ကိုမျိုးပြောတာနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ စမ်းသပ်တာကနေလည်း ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။ အကောင်းပတိပါပဲတဲ့။ နောက်တခေါက်မဖြစ်အောင် ရေများများသောက်ပြီး အစားအသောက်ဆင်ခြင် ပြင်ဆင်ရုံလောက်နဲ့ပဲ လုံလောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆေးခန်းကပြန်ထွက်လာတော့ နီလာလမ်းလျှောက်တာကွချင်သလိုလိုပဲ။ ဖင်ကျိန်းနေတယ်။ လမ်းမှာ ကိုမျိုးနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်လို့ ကားပြတင်းပေါက်နေအပြင်ဘက်ကိုငေးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး စကားလည်းသိပ်ဝင်မပြောပါဘူး။ မေမေနဲ့
ကိုမျိုး ကလည်း နီလာရှက်နေမယ်ဆိုတာ သိလို့ထင်တယ် အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်တဲ့စကားလုံးဝ မဟဘူး။ တခြားပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေလျှောက်ပြောနေကြတယ်။အိပ်ရောက်တော့လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ ပုံမှန် စနောက်နေကျ ကိုမျိုး ဒီအချိန်မှာတော့ ဘာလုပ်ရမယ်ဘာရှောင်ရမယ် ဆိုတာပဲ ထပ်ပြောပြီး နီလာစမ်းသပ်ခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတခွန်းတောင်ထည့်မပြောပါဘူး။ကိုမျိုးပြန်ခါနီးမှ မပြောပဲမနေနိုင်လို့ထင်ရဲ့ . . . ကဲကောင်မလေးရေ နောက်တခေါက်မဖြစ်စေနဲ့တော့
မဟုတ်ရင်ရှက်ရှက်ထပ်ဖြစ်နေမယ်။ . . . ဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။နီလာကတော့ နှုတ်ခမ်းတချက်စူလိုက်ရင်း စပ်ဖြဲဖြဲပဲလုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ အရင်လိုနှုတ်လှန်ထိုးဖို့ တောင်မစဉ်းစားမိဘူး။ . . . “ ဟင်း ” . . . နီလာလွင် အိပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီနေ့ကိစ္စကိုပြန်တွေးပြီး အိပ်လို့ကိုမရဘူး။ တသက်လုံးဖုံးသမျှ၊ ပြဲခါမှပေါ်ဖြစ်နေပြီ။ရင်အတုန်လိုက်ဆုံးက
စအိုထဲပစ္စည်းကြီးသွင်းတုန်း သူလှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ဆုံသွားတဲ့ကိုမျိုး
မျက်လုံးတွေပဲ။ . . . ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ . . .အတွေးတွေကလည်း ဘယ်လိုမှအမျှင်ဖြတ်လို့မရ။သူ့သူငယ်ချင်း အိမ်ထောင်ရှင်မတွေလာလာပြီး ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေပြောတဲ့အထဲက ဖင်များအလုပ်ခံရရင်လေ. . . ဆိုပြီးပြောတာတွေလည်းသတိရ။ .
. . ငါ့နှယ်အိမ်ထောင်မကျသေးဘဲ လူကြားထဲ စအိုကိုအဆော်ခံလိုက်ရသလိုပဲ။ . . .
ငါ့ဟာကြီးကကြီးပါဘိသနဲ့ သူတို့ကြည့်နေတဲ့နောက်ဖက်ကနေဆို ဘယ်လိုများမြင်ရမလဲမသိဘူး။ . . . . . . ဟာ ဘာတွေတွေးနေတာလဲ တော်ပြီ ရအောင်အိပ်တော့။ . . . လို့ အတွေးပေါင်းစုံကို ဒုံးတိဖြတ်ချပြီး အသေအချာအိပ်ဖို့ တဘက်လှည့်ရင်း ခွခေါင်းအုံးကို ညာဘက်ခြေထောက်နဲ့ ခွတင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကတော့ အောက်ဘက်မှာစင်းစင်းလေး။ ည၀တ်ဂါဝန်ပွပွလေးလည်းကလည်း လှုပ်တာရှားတာနဲ့မို့ဒူးလောက်ရောက်နေပါပြီ။ အတွေးတွေဖြတ်ပြီး အိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ နီလာ ရုတ်တရက် အတွေးတချက်ပေါက်ကာ မျက်နှာလေးမဲ့သွားပါတယ်။ ဒီ
ပုံစံပဲ။ သူအချွတ်ခံခဲ့ရတာ။ ညာခြေထောက်ကွေးကွေးနဲ့ ဘယ်ခြေစင်းစင်း။ ရင်ထဲမှာလဲ တခုခုကိုခံစားမိလာသလို တခုခုကိုလည်းလုပ်ချင်နေသလိုလိုကြီးဖြစ်လာတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ တခုသောနေရာမှာတော့ ရွစိစိကနေ စိုစိစိ စဖြစ်လာပါတယ်။ ပညာတတ်ခေတ်မိန်းမသား တဦးဖြစ်တဲ့နီလာ ဘာဖြစ်နေမှန်းသိပေမယ့်.
. . ဒါမျိုးအတွေးပေါက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး ဘယ်နှယ့် သောက်ရှက်အကြီးအကျယ်ကွဲခဲ့တာကို တွေးပြီး ရွလာရတယ်လို့ . . . လည်း စိတ်ထဲတော့ ပြန်ပြောနေပါတယ်။ဒါပေမယ့် တအောင့်လောက်နေတော့ နီလာလွင်တယောက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှက်ပြုံးလေးပြုံးကာ ညာဘက်လက်နဲ့ ဂါဝန်အောက်စကိုအသာလေးလှမ်းကိုင်ပြီးမတင်လိုက်ရင်း။ပြီးပါပြီ။ ။ Posted by